Semalt: 6 I-White White I-SEO Izindlela zokukhuthaza ukuThuthukiswa koThutho
Bonke abaphathi bewebhu bafuna ukuqhuba iindwendwe ezininzi kwiiwebhusayithi zabo, kodwa bambalwa kubo bafezekisa umsebenzi. Ngamanye amazwi, sinokuthi ukuthunyelwa kwendlela yendlela yokuphela kwendlela yokufumana imibono eninzi kwaye ihlaba kwiwebhusayithi yakho, kodwa inxalenye ye-SEO emnyama. Ukuba ufuna ukuvelisa i-traffic quality, kuya kufuneka ulandele imigaqo nemimiselo ye-Google uze usebenzise izicwangciso ze-SEO ezimhlophe - difference resistance pro tank.
UAlexandre Peresunko, uMphathi weNtengo kaMthengi we-10 (Semalt , unika apha iindlela zokumhlophe ezinokuthi ziqhube ixabiso elikhulu lokuthunyelwa kwe-website yakho.
Indlela 1. Qinisa kwii-website ze-Q & A
Ii-Q kunye neeSayithi ezifana nee-Yahoo iimpendulo kunye ne-Quora ziyimithombo efanelekileyo yokuthunyelwa kweendlela. Ukuba unobuciko obuncinci kwaye ufuna ukukhula kwiiveki ezimbalwa, akufanele uchithe ixesha lakho apha naphaya kwaye usebenze kuzo zombini kwezi website.
Ngaphambi kokuba uqale ingxoxo, kufuneka uqaphele isihloko, uluhlu kunye nemigca yokukhangela efanelekileyo kwiwebhusayithi yakho. Akukho nto yokuphendula imibuzo kwiqela apho izihloko zendawo yakho ayixutyushwa ngayo. Ngaphandle koko, ungaqalisa ingxoxo yakho kwaye wenze iqela elihlukile, ukhange abantu abaninzi kwiwebhusayithi yakho ngokushiya isiqhagamshelo sayo kumbuzo. Unokubeka amanqaku amaninzi kwiwebhusayithi yakho enxulumene nomxholo wombuzo uze uthethe abanye abantu ukuba bafumane inani elikhulu lezithuthi.
Indlela 2. Yenza i-Campaign Marketing Marketing
Le mihla, abaninzi abantu banomdla kwi iikhampani zokuthengisa , kwaye kufuneka udale iqela lemikhankaso ngeveki. Qinisekisa ukuba zifanelekileyo kwiwebhusayithi yakho ukuze ukwazi ukujolisa abaphulaphuli abafunayo.
Isinyathelo sokuqala kukubona nokuchonga injongo yephulo lakho..Okulandelayo, kufuneka ucaciswe ngesihloko ofuna ukuxoxa ngayo kwividiyo yakho kunye nokusebenzisa ukubizelwa kwezenzo zokuqhuba izinto ezininzi nangaphezulu kwimizuzu. Ungalibali ukurekhoda nokushicilela iividiyo kwi-YouTube kwaye uqhubeke nokukhuthaza isiteshi sakho.
Indlela 3. Sebenzisa iContation Curation
Indlela yesithathu isebenzisa i-curation yokuqukethwe. Ixesha elidlulayo, kodwa ukondla okukodwa ngenye yezindlela ezibalulekileyo kunye nezamangalisa ukuqhuba umlinganiselo omkhulu wezithuthi kwiwebhusayithi yakho. Ngaphezu koko, kukunceda ukwakha i-backlink esemgangathweni kwiiyure. Kufuneka uhlale ulungelelanisa umxholo kunye nokufundisa kunye nokuphepha ukukopisha umsebenzi wabanye. Kumele kube yintsusa kwaye ingasetyenziselwa kwiwebhusayithi njengeStorify ne-Scoop.it.
Indlela 4. Ikampu ye-Influencer Marketing
Iphulo lokumaketha yempembelelo yindlela efanelekileyo kunye nenamandla yokuphakamisa isayithi okanye uphawu lwakho phambi kwabantu abaninzi. Le mihla, abaninzi abathengisi bedijithali basebenzisa eli cwangciso lokukhuthaza amashishini kunye nemveliso kwi-intanethi. Iintsholongwane zintlobo ezahlukileyo, kodwa abachaphazelekayo abadumileyo bayabugxina, abaqhubi bezinto ezihamba phambili, iingcali zeengcali kunye neeblogi. Unokubambisana nabanye babo ukuba banandiphe amathuba amaninzi kwiziko lakho okanye kwi-brand.
Indlela 5. Hlanganisa iiForithi zokuthumela iiwebhusayithi
Iifom ye-intanethi yindlela efanelekileyo yokuvelisa i-traffic quality. Ungakwazi ukudibanisa iifomathi ezimbalwa ezidumile kunye neposi malunga newebhusayithi yakho. Zama ukubandakanya abantu abaninzi ngeengxoxo kwaye ushiye iinqununu zewebhusayithi kwincoko.
Indlela 6. Sebenzisa iMedia Media
Kufuneka wenze ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kwezingosi zeendaba zoluntu ukuze uqhube i-traffic quality kwiwebhusayithi yakho. I-Facebook, i-Twitter, i-LinkedIn, i-Google + ne-Instagram ziyimithombo enhle kakhulu yokukhuthaza umxholo wakho kwi-intanethi. Zama ukufumana amaninzi amanqweno, izabelo, izimvo, kunye nabalandeli ngokulandela imigaqo nemimiselo yewebhusayithi ye-intanethi. Yabelana ngomxholo wakho kwiindawo ze-Facebook kunye ne-tweet rhoqo. Kufuneka ibe yintsha, inokwabelwana kwaye inolwazi.